Xukumadda Somaaliya oo Ka Hadashay Warbixin Kaso Baxday QM – Radio Daljir
Siteenbar 20, 2017 7:26 b 0
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobe, ayaa qoraal uu soo saaray September 7, ku sheegay afar wadan oo Somaliya ku jirto inaanay wax cod ahi ku yeelan doonin Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobe, sababo ku aadan lacagaha qaaraanka oo lagu leeyahay. Somaliya, ayaa maanta uun heshay qoraalkan.
Somaliya, Guinea-Bissau, Comoros iyo Sao Tome & Principe, ayaa waxaa lagu leeyahay qaaraanka laga doonayo dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobe. Dalalkan waxaa lagu haystaa inaanay labadii sano ee la soo dhaafay bixin qaaraanka, ay khasabka tahay inay bixiyan.
Somaliya waxaa lagu leeyahay lacag dhan $1,354,435. Jaziiradda Comoros waxaa laga rabaa inay bixiso $876,418, iyadoo Sao Tome & Principe laga doonayo lacag dhan $779,636, halka Guinea-Bissau lagu leeyahay $46,439.
Dalalkan, ayaa waxay awood u yeelan doonaan inay codad ku yeeshaan shirka ka soconaya Magaalada New York, haddii ay bixiyan lacagaha lagu leeyahay.